Maxaa Loo Isticmaalaa Faan -weyne?
Haddii aad waligaa baabuurkaaga ku dhex martay dhaqidda baabuurka caadiga ah, ilaa dhammaadka qalab gaar ah ayaa loo isticmaalay in lagu caawiyo qallajinta baabuurka qoyan. Waqtigaas waxaad la kulantay adduun dhab ah, adeegsi wax ku ool ah oo ah taageere dhexe. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Ubaxyo Thanks to impellers rotating, centrifuga ...
Ka warran dayactirka caadiga ah ee marawaxad socodka qulqulka?
Taageeraha axial waa badeecada hawo -qaadka ee caadiga ah, laakiin sidoo kale waa qayb weyn oo ah taageere axial gudaha taxane ah taageereyaasha axial, taageereyaasha axial ee warshadda guud, bakhaarka, xafiiska, degaanka iyo munaasabadaha kale, hawo -qaadista ama kululaynta si kor loogu qaado kulaylka Isticmaalka, haddii chassis waa laga saaray, laakiin sidoo kale taageerayaasha bilaashka ah, ...
Taageere noocee ah ayaan doortaa…. Axial ama centrifugal?
Axial ama centrifugal? Waxaa badanaa loo qaataa in qof walba ogyahay nooca taageere ee loo doorto codsiyada la siiyay. Si kastaba ha ahaatee, marna ma aha wakhti xun in dib loo eego qaar ka mid ah fikradaha aasaasiga ah. Haddaba, aan xoogaa qaadno oo aan daboolno xoogaa fikrado aasaasi ah. In badan oo idinka mid ah waxay u badan tahay in loo sheegay dabeecad o ...
FANS DHEXE: waxay u nuugaan qulqulka gaaska
taageerayaasha warshaduhu waa qaybaha aasaasiga ah ee dhirta ee xakamaynta wasakhda hawada. Xagga warshadaha waa inay awoodaan inay la tacaalaan xaaladaha shaqada ee gaarka ah sida: 24 -ka saac ee hawlgallada maalintii, noocyada kala duwan ee sunta, heerarka socodka kala duwan iyo heerkulka. Taageerayaasha centrifugal ...
Maxay hawo -qaadku muhiim ugu tahay gurigaaga?
Marka xagaagu yimaado, aad bay muhiim u tahay in la ogaado sababta hawo -qaadistu muhiim u tahay si loo ilaaliyo hawada gudaha oo caafimaad leh oo raaxo leh. Meelaha qaarkood, wakhtiga xagaagu ma aha oo kaliya kulayl, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad u qoyan. Xitaa iyadoo leh hawo dhexe, waxay weli u xumaan kartaa hawada gudaheeda. Guryaha casriga ah, tag ...
Heerka kobaca ee qaab -dhismeedka warshadeynta isbeddelka taageere dhexe
Goobta horumarka ee taageere -yaasha centrifugal ayaa weligeedba walaac ka qabay shirkado iyo soo -saareyaal badan, gaar ahaan marawaxadda centrifugal oo leh adeegsi baaxad leh Shiinaha. Meesha horumarinta ee taageere centrifugal waxay si toos ah u saamaysaa jihada horumarka iyo jihaynta istaraatiijiyadeed ee fan ...
Taageeraha dhexe wuxuu leeyahay faa'iidooyin muuqda oo si fiican u dabooli kara baahida wax soo saarka
Marka loo eego mabda'a ah in tamarta kinetic loo beddelo tamar suuragal ah, taageere-yaasha centrifugal wuxuu adeegsadaa xawaaraha sare ee wareega si uu u dardar geliyo gaaska, ka dibna hoos u dhigo oo u beddel jihada socodka si loogu beddelo tamarta kinetic tamarta iman karta. Taageerayaasha waxaa inta badan loo isticmaalaa in kilyaha warshadaha, t ...
Falanqayn ku saabsan faa'iidooyinka cutubka marawaxadaha hawo-qaboojiyaha ee aan habaysanayn
Iyada oo ay jirto kala duwanaanshaha kooxaha isticmaalayaasha, kala qaybinta warshadaha qaboojiyaha ayaa noqday mid qaan gaar ah. Marar badan oo qalafsan, taageere qaboojiye dhaqameedku ma dabooli karo baahida dadka isticmaala. Sidaa darteed, marka la eego kooxaha adeegsadayaasha kala duwan, waxaan bilownay inaan diyaarino hawada hawada ...
Inta badan taageerayaasha ku jira nidaamka hawo -mareenka iyo qaybta qaboojiyaha waxay ku jiraan nidaam shabakad tuubo oo adag, oo meesha rakibistoodu waxay ku kooban tahay ilaa xad, sidaa darteed waxaa jira shuruudo gaar ah oo nuugista shoogga, baabi'inta buuqa iyo dayactirka. Sidaa darteed, qaab -dhismeedka qaab -dhismeedka ...
Jawiga Shaqada & Arrimaha Muhiimka u ah Feejignaanta Taageerayaasha Hawada ee Centrifugal
Deegaanka Shaqada 1) Joogga oo aan ka badnayn 1000 mitir; 2) Heerkulka cimiladu kama hooseeyo - 25 ℃, kama sarreeyo 40 ℃; 3) Qoyaanka qoyan ee deegaanka waa inuusan ka badnaan 90%; 4) Gaaska gudbinaya kuma jiraan aashitada, alkaline iyo dhexdhexaadka daxalka leh, iyo boodhku ...